Thu, Oct 29, 2020 | 13:09:31 NST
मातृका चाम्लिङ / च्यास्मिटार, खोटाङ (हाल मलेसिया)
प्रश्न : विदेशमा रोजगारीको दौरान कुनै समयमा हाम्रो पासपोर्ट हराए दूतावासबाट कसरी पासपोर्ट लिन सकिन्छ ? अनि कति दस्तुर तिर्नु पर्छ ?
उत्तर : विदेशमा पासपोर्ट हराए आफू कार्यरत कम्पनीले हराएको कारण सहित पासपोर्ट नम्बर राखेर स्थानीय प्रहरी कार्यलयमा रिपोर्ट गर्नु पर्छ। साथै भिसा लगाईदिने सोहि देशको अध्यागमन विभागमा पनि रिपोर्ट गर्नु पर्छ। र त्यसको प्रतिलिपी ,प्रहरिमा गरेको रिपोर्टको प्रतिलिपी, पुरानो पासपोर्टको प्रतिलिपी कम्पनीको आधिकारिक पत्र, सक्कली नागरिकता लिएर दूतावास गई दोब्बर दस्तुर तिरेर पासपोर्ट बनाउन सकिन्छ।